မနက်အိပ်ရာထမှာ ကုဋေတစ်သိန်းမျှ ကြီးမားသော ကုသိုလ်ယူနည်း – Alanzayar
မနက်အိပ်ရာထမှာ ကုဋေတစ်သိန်းမျှ ကြီးမားသော ကုသိုလ်ယူနည်း
မနက်အိပ်ရာထမှာ ကုဋေတစ်သိန်းမျှ ကြီးမားသော ကုသိုလ်ယူနည်းတစ်စက္ကန့်အတွင်း ကုဋေ တစ်သိန်းလောက်ကြီးမားတဲ့ ကုသိုလ်တွေရရှိသွား နိုင်မည့် နေနည်းများ
၁ ။ နိုးနိုးချင်း….မြတ်စွာဘုရားရှင် ဟောကြား ဆုံးမသည့်အတိုင်း နိုးနိုးချင်း ထထချင်း အနေအထား မပြောင်းမရွေ့ပဲ ဝင်လေ ထွက်လေ လေးကို သတိကပ်မှတ် နေလိုက်ပါမယ် ။
ဒါဆို ကြီးမားတဲ့ ကုသိုလ်တွေက တစ်စက္ကန့်မှာ ကုဋေတစ်သိန်းနှုန်းဖြင့် ရရှိသွားပြီးလည်း ဖြစ်ပါတယ် ။ ခါတိုင်းလို သောကဖြင့် နိုးထခြင်း မဟုတ်တော့သည့် အတွက် မင်္ဂလာတရားဖြင့် စတင်သည့် နေ့လေး ဖြစ်သွား ပါတယ် ။
၂ ။ လှုပ်လှုပ် ရွရွ ဟူသမျှ…. အိမ်သာသွားရာ ၊ သွားတိုက်ရာ ၊ မျက်နှာသစ်ရာ တစ်မိနစ်ပဲ ဖြစ်ပါရစေ ၊ သတိကပ်၍ သိနေရန် ကြိုးစားနေ လိုက်ကြပါမယ် ။
၃ ။ သက်ရှိ ထင်ရှား မြတ်စွာဘုရားအား…
၃ . ၁ . မပြုမီ ဝမ်းသာ….ရေတစ်ခွက်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ၊ ပြည့်ပြည့် စုံစုံပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဘုရားရှင်အား ကပ်လှုရန် ပြင်ဆင်ရာမှာကုသိုလ်ပြု ရတော့မယ်ဟု ဝမ်းသာပီတိတွေ ဖြစ်နေပါ့မယ် ။
၃ . ၂ . ပြုဆဲဝမ်းသာ…. ဘုရားကပ်လှုရာမှာ သက်တော်ထင်ရှား ရှိသည်ဟု မှန်းဆပြီး ကုသိုလ် ပြုရပြီဟုဝမ်းမြောက် ဝမ်းသာ ဖြစ်နေပါ့မယ် ။ ဒါဆိုကုသိုလ်က အများကြီး ဖြစ်နေပါပြီ ။
၃ . ၃ . ပြုပြီး ဝမ်းသာ….ကုသိုလ်တို့ကို ပြုခဲ့ရလေပေပြီဟုပြန်လည်ဆင်ခြင်ပြီး ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ ဖြစ်နေလိုက်ပါ။
၃ . ၄ . ဉာဏ်ထဲ့လိုက်ပါ…. ကုသိုလ်ပြုလျှင် ကုသိုလ်ရချေမည်ဟု ကံ၏အကျိုးကို ယုံကြည်သော ဉာဏ်လေးထည့်လိုက်ပါ ။အမြတ်ဆုံး တိဟိတ်ကုသိုလ် ရရှိသွားပေသည် ။
၃ . ၅ . ဝိပဿနာဆင်ခြင်…. ဘုရားရှိခိုးချင်တဲ့ စိတ်ကလေးကို သိနေအောင် ကြိုးစားပါမယ် ။
( စိတ္တာနုပဿနာ )…. ထိုင်ချ ရှိခိုးအမူအယာတွေ သိနေအောင် ကြိုးစားနေပါမယ် ။
(ကာယာနုပဿနာ )…. ခြေမှာလက်မှာ နာကျင်နေတာ သိအောင် ကြိုးစားပါမယ် ။
( ဝေဒနာနုပဿနာ )…. သည် ဖြစ်စဉ်လေးတွေကို ပြန်လည် ဆင်ခြင်နေရင်
( ဓမ္မာနုပဿနာ )…. ဒါဆိုအိမ်မှာ ပဲ ၊ သိန်းထောင်ချီ မလှူနိုင်ပေမဲ့ ကုသိုလ်ထူးတွေ များစွာရရှိနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
၄ ။ သန့်ရှင်း ချက်ပြုတ်… အိမ်သူ အိမ်သားများ အစစအရာရာ အဆင်ပြေပါစေ ၊ တရားအားထုတ် နိုင်ရန်အလို့ငှာ စားသုံးနိုင်ကြပါစေ ၊ နိဗ္ဗာန်၏ အထောက်အပံ့ ဖြစ်ပါစေလို့ မေတ္တာပွားနေရင် အလွန်အားကြီးတဲ့ ကုသိုလ် ရရှိသွား ပြန်ပါပြီ ။
၅ ။ ထွေထွေစုစု…. ထမင်းဆာလာရင် ချက်ချင်းမထပဲ ထချင်တဲ့စိတ် ၊ စားချင်တဲ့စိတ်ကို တစ်မိနစ်ခန့် ၊ ရေချိုးချင်လာရင် ချက်ချင်းမထပဲ ချိုးချင်စိတ်ကို တစ်မိနစ်ခန့် သိနေလိုက်ပါ ။ အိပ်ချင်လာရင် ၊ သွားချင်ရာတွင် နည်းတူ ပြုလိုက်ပါ ။ဘာဝနာ ကုသိုလ်မို့ စွမ်းအား အလွန်ကြီးမားပါတယ် ။ ဖိနပ်ကို ညီညီညာညာ သတိနဲ့ ချွတ်မယ် ၊ ဝတ်ပါမယ် ။
စကားကို အေးအေး ဆေးဆေး နူးနူးညံ့ညံ့ ပြောပါမယ် ။ T.V ကြည့်ခြင်း ၊ စကားများများ ပြောခြင်း ၊ သီချင်းနားထောင်ခြင်းတွေက အကုသိုလ် များစေတာမို့ နည်းနည်းချင်း တိုး၍ တိုး၍ လျော့ပါမယ် ။ အတင်း မပြောဖြစ်အောင် ကြိုးစားထူထောင်ပါ ။
မကောင်းမြင် ဝါဒ ၊ မကောင်းသည့် ဘက်တွေးခြင်း လျော့ပါ ။ ဥပမာ – သည်လူ တရားစာတွေသာ ရေးနေတာ တရားအားထုတ်မှာ မဟုတ်ပါဘူးလို့ မတွေးပဲ ၊ ကိုယ်မသိတာ ဖြစ်လို့ တရားလည်းအား ထုတ်မှာပါဟု တွေးလိုက်ပါ ။
၆ ။ အိပ်ယာဝင်…. ၅ မိနစ်ခန့် ဝင်လေ ထွက်လေကိုဖြစ်စေ ၊ဘိုက်ပေါ်လက်တင်ပြီး ဖောင်းတယ် ပိန်တယ် သတိကပ်၍ မှတ်နေလိုက်ပါ ။ အားကြီးသော ကုသိုလ်များ ထပ်ဆင့် ထပ်မံရရှိနေပြီ ဖြစ်ပါတယ် ။
၇ ။ အကုသိုလ်များလှ လူ့ဘဝ…. အဘိဓမ်မာအရ သတိမပါပဲ စားတာ ၊ နတော ၊ ထိုင်တာ အကုသိုလ်တရားတွေမို့ လူဘဝပြန်ရဖို့ အလွန်ခဲယဉ်လှ ပါတယ်တဲ့ ။ အထက်က အတိုင်းနေမယ် ဆိုရင်တော့ အကုသိုလ်ပါးလို့ကုသိုလ် များကြမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ပါမောက္ခချုပ် ဆရာတော်ဘုရားကြီး
Previous Article ခြေဖဝါးကွဲခြင်းအတွက် ဆေးနည်း….a
Next Article နေ့စဉ်အလုပ်ရှုပ်လွန်းလို့ ကုသိုလ်ရေးမလုပ်နိုင်ပါဘူး ဆိုသူများအတွက် နည်းလမ်းကောင်း